ज्ञानगुणका कुराः कुन ब्लड ग्रुप भएकाले के खाने के नखाने ? - HAMRO YATRA
ज्ञानगुणका कुराः कुन ब्लड ग्रुप भएकाले के खाने के नखाने ?
‘लो क्यालोरी’ खाना खादा शरीरको तौल कम राख्न सकिने र हाई ईनर्जीका खानेकुरा खाना खादा मोटोपनको समस्या बढ्ने भन्ने होइन । शरीरको तौललाई सन्तुलिन राख्नको लागि आफ्नो रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) अनुसारका खानेकुरा खानुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
पाेषण बिशेषज्ञहरुका अनुसार आफ्नो ब्लड ग्रुप अनुसारको भोजन खाने हो भने मोटोपन कम हुने मात्र होइन विभिन्न रोगहरुबाट समेत छुटकारा पाउन सकिन्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार हामीले खाएका खानेकुराले हाम्रो ब्लड ग्रुपसँग रिएक्सन गर्छ । यदि हामी आफ्नो ब्लडग्रुप अनुसारको खाना खान्छौँ भने त्यो सजिलै पच्न सक्छ र शरीरले पनि उर्जा प्राप्त गर्छ ।
त्यसो हुँदा विभिन्न संक्रमण तथा बिरामी हुने सम्भावना कम हुन्छ । तसर्थ, पाेषण विशेषज्ञहरुले फरक रक्त समूहका व्यक्तिहरुका लागि फरक फरक खानेकुराको सिफारिस गरेका छन् ।